Fiisaha Turkiga ee muwaadiniinta Shiinaha: hage gaaban - ALinks
Waxaad fiisaha Turkiga ku heli kartaa khadka tooska ah ee internetka Jamhuuriyadda E-Visa ee Turkiga. Muwaadiniinta Shiinaha waxay si fudud ku heli karaan fiiso joogitaan gaaban ah Turkiga, dalxiis, ama ganacsi. Haddii aad u baahan tahay taageero dheeri ah si aad u dalbato fiisaha Turkiga ee muwaadin Shiineys ah waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa adeegga fiisaha sida iisa or VisaHQ.
Si aad u hesho fiisaha shaqada ee Turkiga, waxaad u baahan tahay inaad si wadajir ah uga codsato shaqo-bixiyahaaga mustaqbalka ee Turkiga. Waxaad ku sameyn kartaa taas safaaradda Turkiga ee deegaankaaga ama Turkiga, aqri halkan ku saabsan sida looga helo rukhsadda shaqada Turkiga. Haddii aad rabto inaad shaqo ka hesho Turkiga waad aqrin kartaa halkan sida loo helo shaqo turkey.
Si aad u hesho fiisaha ardeyda, wali kama aan qorin maqaal ku saabsan, ee hadda, bal fiiri tan Maqaalka maqaalka, waa ingiriis markaa isticmaal Google Translate hadaad ubaahantahay. Laakiin weli, waxaad u baahan tahay meel aad marka hore wax ku barato, haddaba fiiri halkan ku saabsan jaamacadaha Turkiga ee wanaagsan.
Xilligan la joogo, Abriil 2021, weli waxaad u baahan tahay inaad imtixaan gasho oo aad buuxiso foomkan ka hor intaadan imaan si aad u gasho Turkiga, laakiin ugu cusbooneysiin xayiraadaha safarka ee Turkiga hubi Xarunta Safarka ee IATA lana xiriir shirkadaada diyaaradaha intaadan safrin.
Shiinaha ma soo gali karaa Turkiga?
Haa, laakiin waxaad u baahan tahay fiiso marka hore. Haddii aad haysato baasaboor Shiineys ah, waxaad fiiso ku heli kartaa internetka at the bogga elektarooniga ah ee Jamhuuriyadda Turkiga Nidaamka Codsiga Visaha Elektaroonigga ah.
Sidee loo helaa fiisaha Turkiga ee muwaadiniinta Shiinaha?
Haddii aad haysato baasaboor Shiineys ah, waxaad fiiso ku heli kartaa internetka at the bogga elektarooniga ah Jamhuuriyadda Turkiga Nidaamka Codsiga Visaha Elektaroonigga ah. Waad codsan kartaa wakhti kasta iyo maalin kasta waana inaad jawaab ka heshaa wax ka yar 48 saacadood.
Fiisahaaga Turkiga wuxuu ansax noqonayaa laga bilaabo maalinta aad timid wadar ahaan muddo dhan 180 maalmood, laakiin dhab ahaan ma joogi kartid waddanka in ka badan 30 maalmood.
Waxaad heli doontaa fiiso galitaan badan, taas macnaheedu waa waxaad ka geli kartaa kana soo bixi kartaa Turkiga inta aad doonto intaad rabto inta lagu jiro 180-ka maalmood, illaa iyo intaad ka joogi doonin wax ka badan 30 maalmood Turkiga.
Muddo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa in fiiso lagu tago Turkiga?
In ka yar 48 saacadood, taasi waa ta uu kula taliyay qofka bogga rasmiga ah ee elektarooniga ah. Haddii aad rabto inaad dhakhso u hesho waad dalban kartaa iVisa oo fiisadaada ku hel wax ka yar 24 saacadood, 4 saacadood, ama xitaa 30 daqiiqo.
Sidee looga helaa caawimaad arjiga fiisahaaga?
Waad dalban kartaa fiisaha Turkiga kaligaa at the bogga rasmiga ah ee elektarooniga ah halka ay sidoo kale a su'aalaha badanaa la isweydiiyo (FAQ) bogga Shiinaha.
Laakiin haddii aad u baahan tahay fiiso Turki ah wax ka yar 24 saacadood ama haddii aad u baahan tahay caawimaad deg-deg ah oo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan dalabka fiisahaaga waxaad mari kartaa adeegga fiisaha lagu kalsoon yahay sida iisa.
Weydii caawimaad dheeraad ah muwaadiniinta Shiinaha iVisa
Xagee ka codsadaa fiisaha Turkiga?
oo leh iisa
Codsiga Visa haa haa
Talada Khabiirka qaar ka mid ah bogga xiriirka haa fariimo, emayl, ama taleefan
Hubinta dukumiintiyada kahor gudbinta maya haa
Sii akhriso, Dalbo
Waa imisa fiisada Turkiga ee Shiinaha?
60 US Dollar oo lagu daray khidmadaha bixinta khadka tooska ah, in ka yar laba doolar caadi ahaan waxay kuxirantahay habka lacag bixinta. The bogga rasmiga ah ee elektarooniga ah aqbalaa habab badan oo lacag bixin ah.
Muwaadiniinta Shiinaha ma heli karaan fiiso markay yimaadaan Turkiga?
MAYA, sida lagu xaqiijiyay websaydhka rasmiga ah ee elektaroonigga ah ee Visa-ka Turkiga, sidaa darteed waxaad ubaahantahay inaad fiiso hesho kahor kahor inta badan xitaa shirkadaada duulimaadka kuuma ogolaan doono diyaarada fiiso la'aan.
Waxyaabaha aad rabto inaad ogaato kahor intaadan bilaabin arjiga elektaroonigga ah bogga rasmiga ah ee elektarooniga ah.
Baasaboorkaagu waa inuu shaqeynayaa ugu yaraan lix bilood oo kale laga bilaabo maalinta aad damacsan tahay inaad timaado Turkiga.
Fiisaha elektaroonigga ah wuxuu kaliya u ansaxsan yahay dalxiiska iyo ganacsiga ama dhacdooyinka ganacsiga, ma ahan shaqo ama waxbarasho
Adiga oo gujinaya "Apply Now" bogga rasmiga ah ee elektarooniga ah iyo xulashada dhalashadaada waad xaqiijin kartaa u-qalmitaankaaga elektarooniga ah.
E-Visa gaar ah waa in loo helaa rakaab kasta, oo ay ku jiraan carruurta, in kastoo carruurta lagu daro baasaboorada waalidkood.
Waxaa laguu soo dirayaa e-mayl xiriir la leh si aad u soo dejiso e-Visa-gaaga. Markaad gasho oo aad ka baxdo Turkiga, fadlan daabac ama hayso e-maylkaaga elektaroonigga ah.
Fadlan la soco waa inaad xaraysaa codsi cusub haddii aad rabto inaad soo gasho kahor taariikhda la cayimay.
Hawsha ka dib, wax faahfaahin ah lama cusbooneysiin karo ka dib marka fiisaha elektarooniga ah la farsameeyo. Adiga ayaa mas'uul ka ah hubinta in macluumaadkaagu uu la mid yahay macluumaadka baasaboorkaaga. Fiisahaaga elektaroonigga ah haddii kale wuu ansax noqonayaa, oo lacag celin laguma soo celin doono.
Waxaad la xiriiri kartaa fiisaha elektarooniga ah Caawinta Shaqada wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan “Nala Soo Xiriir”
Iskuxirayaasha kuxiran waxaa loo adeegsaday nuxurka kor ku xusan si aan ugu maalgalino shaqadeena. Waxaan wali idinla wadaagaynaa macluumaadka ugu kalsoon ee aan heli karno.
Daboolka kore waa Sawir ay soo qortay Tanjir Axmed Chowdhury on Aadaabta
Qaababka Loogu adeegsado Gaadiidka Turkiga
Sidee loo codsadaa fiisaha Australia?
Xiriirka Talyaaniga, fiisaha, magangelyada, dukumintiga safarka, baasaboorada, kaararka aqoonsiga
Fiisaha Afgaanistaan ​​ee Hindida